श्रीमती सात प्र’कारका हुन्छन्, तपाईंको श्रीमती कुन व’र्गकी -
तपाईलाई थाहा छ श्रीमती कति किसिमका हुन्छन्। बौ’द्ध ग्र’न्थमा श्रीमतीका प्रकार बारे एउटा रमाइलो वर्णन भेटिएको छ । भगवान गौतम बुद्ध आफैले सात किसिमका श्रीमतीहरूको बारेमा बयान गरेका हुन् ।
कुरा गौतम बुद्धले ध’र्म प्रचार गरिरहेको बेलाको हो । त्यस कालमा अनाथपिण्डिक नामका एक व्यक्ति थिए । उनी आफै, उनका छोरा र दुई छोरी साह्रै धर्मात्मा थिए ।उनले आफ्ना छोराको बिहे सुजाता नामकी एक युवती सँग गरिदिएका थिए । सुजाताको स्व’भाव भने विपरीत । एक पटक भगवान अनाथ पिण्डिकको घरमा जाँदा कोलाहल म’च्चिरहेको रहेछ ।
कारण सोध्दा अनाथपिण्डिकले भगवानलाई सबै बताइदिए । त्यसपछि भगवानले सुजातालाई बोलाई सात प्रकारका श्रीमती बारे उपदेश दिएका रहेछन् । सात प्रकार यस्तो छ :
(१). ब’ धक श्रीमती : जो स्त्री आफ्ना श्रीमान प्रति द्वे’ ष भाव राख्छे, अहित चिन्तन गर्छे, पर’पुरुषप्रति आ’शक्त भएर श्रीमानको अ’पमान गर्छे, श्रीमानको धनका लागि श्रीमानको ब’ध गराउन पनि पछि पर्दैन, त्यस्ती पत्नी ब’धक पत्नी हुन्। यस्तो दुशील स्त्री म’रणपछि न’रक जान्छे।
(४). मातुसम (आमा जस्ती) : श्रीमती आमाले छोरोको हित चाहे जस्तै सँधै श्रीमानको हित चाहने हुन्छे । प्राप्त धनलाई राम्रोसित सम्हालेर राख्छे । यस्ती श्रीमती सदाचार यु’क्त भएकीले म’ रणपछि स्व’र्णलोकमा गएर सुख भोग गर्छे।
(६).सखीभरिया (साथी जस्ती) श्रीमती : श्रीमान देखेर प्रसन्न हुने, आफ्नो कुल प’रम्परा कायम गर्ने, शीलवती तथा पतिव्रता हुन्छे । यस्ती स्त्री पनि म’ रणपछि स्व’र्गलोकमा जान्छे।
”सात प्रकारका श्रीमतीहरुको व’र्णनपछि भगवानले सुजातासित सोधे, सुजाता, लोकमा यी सात प्रकारका श्रीमतीहरु छन् । यी मध्ये तिमी आफूलाई कुन प्रकारकी श्रीमती मान्छौ । ल अब तपाई पनि भन्नुस्, तपाई महिला हुनुहुन्छ भने तपाई कस्ती श्रीमती ? तपाई पुरुष हुनुहुन्छ भने तपाईकी श्रीमती कस्ती ?
मुश्किलहरु पछि हासिल भएको सफलता ले नै वास्तविक आनन्द दिन्छ